Mobile House: Huawei 8600 ကို version 2.3.5 သို့တင်နည်း
Huawei C8600 update to Android version 2.3.5
Rom Manager Premium v4.4.0.7 & recovery-clockwork-4.0.1.5-ascend2 ကို အရင် ဒေါင်းပါ။Rom Manager Premium v4.4.0.7 download From mediafire
Android 2.3.5 update for Huawei C8600 Download
ပြီးရင် recovery-clockwork-4.0.1.5-ascend2 ဖိုင်နဲ့ Android 2.3.4 update ကို ဖုန်းရဲ့ SD card ထဲကို copy ကူးထည့်ထားပါ။ Android 2.3.5 update ဒေါင်းလော့ ဖိုင် က zip ဖိုင်ပါ။မဖြည်ပဲ Memory card ထဲ ကူးထည့် ပါ။ Rom Manager Premium v4.4.0.7 ကိုဒေါင်းပြီးသား ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို 3G internet သို့ wifi ချိတ် ပြီး Rom manager ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ အဲ့ ထဲက Flash ClockworkMod Recovery ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး download လုပ်လိုက်ပါ။ download လုပ်ရာမှာ ဖုန်း model ရွေးခိုင်းရင် Huawei Ascend ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ “ROM Pre-Installation” Box လေးပေါ်လာရင် အဲဒီထဲက “Wipe Dalvik Cache” ဆိုရွေးပေးပြီး ok နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ ဖုန်းက auto reboot ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ လက်ရှိတင်ထားတဲ့ ROM ကို Backup လုပ်ထားရပါမယ် ။ ခုနကသွင်းထားတဲ့ Rom Manager Premium v4.4.0.7 ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Backup Current ROM ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်းက auto reboot ဖြစ်သွားပြီး Backup လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် Rom Manager Premium v4.4.0.7 ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install ROM from SD Card ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီထဲကနေ ခုနက SD card ထဲကို copy ကူးထည့်ထားတဲ့ Android 2.3.4 update ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ဖုန်းက Android version အသစ်ကို တင်ပါလိမ့်မယ်။ ၅မိနစ်ခန့်ကြာပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းက reboot ပြန်တက်လာပြီး Android version 2.3.5 တင်လို့ ပြီးပါပြီ ။
Posted by Mobile House at 11:25 AM
Hein Htet April 4, 2012 at 7:25 AM
Rom Mananger က လင့်ခ် သေနေပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ချက်လောက်ပြန်ပေးလို့ ရမလား ?
nyi win tun June 23, 2012 at 12:59 AM
can i upgrade my huawei c8600 (build number 280) at your mobile shop? Cos' I cant download version 2.3.5.